musha Oceania Margot Robbie Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Margot Robbie Biography inoratidza Chokwadi pamusoro pehucheche Nyaya Yake, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Murume, Hupenyu hwePamoyo, Net Kukosha, uye Mararamiro.
Zvichitaurwa zviri nyore, tinokupa iwe nerwendo rwemuitikadzi, kubva pamazuva ake ekutanga, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
Kuti uve nehupenyu hwako hwechido, heuno hudiki hwake kune vakuru gallery - chidimbu chakakwana chaMargot Robbie Bio.
Pfupiso yemufananidzo waMargot Robbie Biography. Tarisa hupenyu hwake uye simuka nyaya.
Ehe, isu tese tinoziva kuti iye ane chiitiko-kuba magnetism mukuita akasiyana akasiyana mabasa. Nekudaro, zvinotyisa kutyisa kuti vanhu vazhinji vakafadzwa nekuratidzwa kwake kunonakidza vanongoziva chidimbu cheBio yake.
Nekudaro, isu takagadzirira chidimbu chinobatanidza cheye memoir, iyo iwe yaunowana yainakidza. Pasina yakawanda ado, ngatitangei.
Margot Robbie Yemwana Nhau:
Mufananidzo usingawanzoitika wehudiki waMargot Robbie.
Kune vatangi veBiography, iye ane zita remadunhurirwa rekuti "Maggot". Zvisinei, zita rake rekuzvarwa rave riripo Margot Elise Robbie.
Iye akazvarwa pazuva re2nd raJuly 1990 kuna amai vake, Sarie Kessler uye baba, Doug Robbie, muDalby, Queensland (Australia). Iye ndiye wechitatu wevana vana akazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake, inoratidzwa pazasi.
Sangana naamai vaMargot Robbie, Sarie Kessler uye baba, Doug Robbie.
Zvinosuruvarisa, mutambi uyu haana kunakidzwa nehunhu hwoumwana hwekugara zvachose naamai nababa vake. Paaingova nemashanu chete, imba yevabereki vake yakapunzika, zvichitungamira kurambana kwavo muna 1995.
Margot Robbie Achikura Mazuva:
Semusikana mudiki, muimbi wenguva yemberi aifarira kutamba nehama dzake. Ndiye iye watinotsanangudza seinoshamisa diki lass. Ehe, Robbie ainetseka nezve chero chinhu chinobuda paTV.
Zuva harina kukwanisa kupfuura iye asina kuisa mutambo wemwana kana maviri kumba. Unoziva here?… Robbie aiwanzodzokorora zvekare zvese zvaakange aona paTV kuti mhuri yake ione.
Iye anotovaraira kuti vabhadhare ma mini house show avo. Pane nguva dzaaiita zvemashiripiti uye aizoita kuti vanin'ina vake vabhadhare zvakapetwa kana vaida kudzidza zvakavanzika zviri kumashure kwekunyepedzera kwake.
Sezviri pachena, akarererwa pamwe naAnya, Lachlan naCameron (vanin'ina vake) papurazi raambuya nasekuru vake. Tarisa iye achiisa isu kuburikidza nemazuva ake ekukura muvhidhiyo pazasi.
Margot Robbie Mhuri Mhemberero:
Kuzvarwa kune nzimbe tycoon kwakanyora ramangwana rakavimbika uye rakagadzikana reMargot. Zvisinei, hupenyu hwoumbozha hwemhuri yake hwakaguma mushure mekurambana kwevabereki vake.
Nekudaro, iye nyeredzi uye vanin'ina vake vaifanira kuvimba nemari yavanowana kubva kuna amai vavo basa rezvekurapa. Kubva zvaakavhara wachi 5, Margot aratidza huwandu hwepamusoro hwekugutsikana nemhuri yake kumashure.
Hongu, nguva yega yega yaakashandisa neese mamwe emanage ake aireva zvakawanda kupfuura goridhe kwaari paakange achikura. Imari chaiyo kuti musikana mudiki akakurira mupurazi akasimudza mhuri yake kubva pavari vepakati nepakati kuenda padanho repfuma.
Margot Robbie Mhuri Kubva:
Nekufambira mberi kwake munyika yevaraidzo, muimbi anozvitutumadza neDalby, Queensland, kwaakaberekerwa. Iye anozviona senzvimbo yekufungidzira yekubudirira kwaakawana kusvika parizvino.
Tarisa mepu yekurima yenzvimbo yake yeKutanga.
Chii chimwezve?… Kwaanozvarirwa ndiko kunopakati penzvimbo dzeAustralia dzakapfuma nekudyarwa kwezviyo.
Kubva pane zvatakatarisa, ane madzitateguru eScotland. Kune rimwe divi, dzinza rake remadzimai rinonyanya kuve verudzi rweGerman neSorbian.
Tsvagurudzo yedu inoratidza kuti amai vaMargot vanobva kunharaunda yevagari vemuGerman vakatamira kuAustralia muma1800.
Margot Robbie Dzidzo:
Pakazosvika iyo nyenyeri iri kuuya yezera rekuenda kuchikoro, amai vake vakafunga kuti zvaive nani kuti apinde chikoro chine chekuita nezvevaraidzo. Nekudaro, akanyoresa Margot pachikoro chesekasi kwaakakunda mukutamba.
Imwe yehunyanzvi hwake yaive trapeze. Unyanzvi hwakauya hunobatsira gare gare mune rake basa rekuyedza.
Pana 8, iye nyeredzi anga apedza zvidzidzo zvake pasekiti chikoro uye akagamuchira chitupa chechirongwa. Achiziva zvizere kuti aifanira kufambisira mberi basa rake mukuita, akanyoresa kuSomerset College, kwaakadzidza mutambo.
Vechidiki tarenda rinotora mumutambo wekoreji unonzi "Andrews High".
Hupenyu panguva yechikoro chesekondari hwakanga husingaite kune anoshuvira mutambi uyo aishanda matatu mabasa panguva imwe chete achidzidza. Ehe! Margot akachenesa dzimba, aishanda muresitorendi yeSubway, uye aibata bhawa kuti awane mari achiri kuyaruka.
Margot Robbie Kwekutanga Basa Roupenyu:
Izvo zvaitaridzika semararamiro ekare eiyo nyeredzi yaizotendeuka mushure mekupedza kudzidza. Kunyange zvakadaro, haana kumboregeredza kukosha kwekutanga kwake kwekuzvininipisa.
Nekudaro, Robbie akatanga basa rake nekutarisa muVigilante neICU (maviri epasi-bhajeti akazvimirira mafirimu anonakidza) achiri kuchikoro chesekondari. Basa rake mubhaisikopo rake rekutanga raisiririsa zvekuti unogona kubvaruka mushure mekuona tirera pazasi.
Hupenyu Mushure mekusekondari
Kufanana nemumwe nemumwe mudzidzi anovimbisa, Robbie aifanira kusarudza padanho rake rinotevera mushure mekupedza kudzidza. Sekufanirwa kwaizove nazvo, muimbi akatamira kuMelbourne (guta rekuzvarwa re Ruby Rose), kwaakaenderera mberi nebasa rake rekuita.
Neraki, Robbie akaisa chinzvimbo chevaenzi mumitambo yemitambo ya2008 - Guta Rokuuraya - uye nyeredzi saCainlin Brentford. Kuita kwake kuombera muchiratidziro kwakamupa chivimbo chekuongorora mamwe mabasa mazhinji uye kuvaka chikamu chake.
Margot Robbie Bio - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Sezvo chirevo chichienda, “Mukana haugogori; unozviratidza kana warova pasi musuwo ”, saizvozvowo nyeredzi yakatsvaga mafuro manyoro. Robbie paakange ave nemakore makumi maviri ekutanga, akaonekana nemhuri yake ndokuenda kuUS mu2010.
Kuenda kuAmerica yaive imwe yesarudzo dzakanakisa dzaakaita muhupenyu hwake hwebasa. Ikoko, akaverengerwa mumafirimu mazhinji uye mutambo wemitambo.
Nekudaro, budiriro yake huru yakauya mugore ra2011 paakaitisa muhupenyu hwevatambi vemafirimu, Mhuka yeWall Street.
Heino bhaisikopo iro rinosimudzira kumusoro kwake mukurumbira.
Kutamba Naome Lapaglia mune iyo bhaisikopo kwakamupa mibairo yakawanda yakanaka kubva kune vanoona. Asi iye akabhadhara mutengo wakakura pakubudirira kwake.
Chibayiro chaRobbie cheMukurumbira:
Unoziva here?… Basa raRobbie saNaomi raida hunhu hwake kuti ave ne * x naJordan - ichitambirwa na Leonardo DiCaprio - pamubhedha uzere nemari. Izvi zvakakonzera kuti acheke kakawanda kumusana.
Moreso, aifanira kuvimba nedoro rakaomarara kuti abvise pfungwa dzake pavashandi makumi matatu vakatsvikinyidzana naye mukamuri diki rekurara. Kusvika iye zvino, sekuru nasekuru vake havana kumboziva kuti iye akaita se * x chiitiko chinomuti aoneke akashama.
Ndaiuya kubasa mangwanani iwayo ndichitya. Ndakanga ndichidedera uye ndakafunga kuti handikwanise kuzviita izvi. Nekudaro, ini ndakapfura katatu tequila ndokubvisa mbatya dzangu shure.
Izvo zvakanyatsobatsira kumisa mawoko angu ekubvunda uye zvakandipa ini zvishoma zvekuwedzera kuvimba. Ipapo ndakaita chiitiko, uye ndanga ndanaka.
Margot Robbie Biography - Yekubudirira Nhau:
Mutambi weAustralia uyo akatanga pamafirimu ane bhajeti shoma akakurumidza kuzivikanwa pasi rose uye akahwina mubairo weMambo weMutambi Nyowani. Yake zvishoma nezvishoma yekubudirira nyaya yaive yakafanana zvakanyanya neiyo ya Kylie Minogue.
Unogona kunyatsoona mufaro pachiso chake paakagashira iwo maMubairo Emitambo muna2013.
Izvo hazvina kutora Robbie nguva yakawanda kuti aone kuti aifanirwa kusimudzira mamwe mabasa anotyairwa nevakadzi. Nekudaro, akatanga kambani yekugadzira inonzi LuckyChap Varaidzo padivi peshamwari dzake uye murume anouya.
Margot Robbie Achibudirira SeComic Villain:
Sezvineiwo, Robbie akaisa pasi rekodhi mu2016 sezvaakasaina kuti atore chikamu mufirimu gamba; Suicide kukupfura. Nekudaro, akazove munhu wekutanga kuratidzira Harley Quinn (DC Comics villain).
Hunhu hwake hwekupenga saHarley Quinn akagadzira yakawanda ye "WOW" nguva dzevateveri vake.
Kuona kuti iyo bhaisikopo yaisanganisira veteran vatambi (senge Will Smith), Robbie akadzidziswa zvakanyanya kuomesa kuita kwake kwakanyanya. Muchokwadi, akatanga gadziriro yake mwedzi mitanhatu vhidhiyo isati yagadzirwa.
Chii chimwe?… Robbie akazvimisidzira mumutambo wetsiva, silika yemuchadenga, jimunasitikisi, uye akabata mweya wake ari pasi pemvura kwemaminitsi mashanu panguva iyi. Nekutenda, iyo bhaisikopo yakava yegumi-yepamusoro-inotyisa firimu ra2016 uye yakarova mari yepasirese yemadhora mazana manomwe nemakumi masere nemasere emadhora.
Mhedzisiro Yekuzviuraya Chikwata:
Kutevera kuongororwa kwebasa rake mu kuzviuraya, Robbie akange asingade kuratidza kuti aive mutambi wepi aive akanakisa. Hongu, zviito zvake zvakaita kutaura kwese uye zvakamuwanira mubairo weFavorite Action Movie Actress.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora iyi Bio, Robbie akarekodha kuvandudza kwakanyanya seyakagadzwa muvaraidzi. Akambogovana mubairo wake neBrisbane charity Youngcare iyo inotsigira vanhu vakaremara. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Margot Robbie Murume:
Pane imwe nguva muhupenyu hwake, muvaraidzi weAustralia akasvika padhuze ne Will Smith kuti vanhu vaifungira hukama hwavo. Paive nemakuhwa achibhururuka achitenderera kuti Robbie aifambidzana nemhare veteran American mutambi.
Nekudaro, fungidziro yevafeni yakaenderera kwenguva yakati asi haina kupa chibvumikiso chechokwadi chekuti vanhu vakakurumbira vaidanana.
hukama hwake naWill Smith hwakaramba hwakajeka kusvikira asangana nemurume wake.
Sezvineiwo, yake yechokwadi nyaya yerudo yakatanga panguva yaaisatarisira. Muna 2013, akasangana nemukomana wake akatendeuka murume (Tom Ackerley) pane seti yeiyo Hondo Yenyika II firimu; Suite Francaise.
Kare ikako, murume wake weramangwana aishanda semubatsiri director uye akamufarira. Kazhinji gore gare gare, shiri dzerudo dzakatanga kubuda nemisi asi dzakachengetedza hukama hwadzo pasi pe radar.
Isu takachengeta hupenyu hwedu hwerudo chakavanzika nekuti isu tanga tisiri kuutora zvakanyanya. Uyezve… munhu wese akaziva.
Zvaive zvakashamisa. Sezvineiwo, imba yedu yakashanduka ikaita Iyo The Jerry Springer Show kwechinguva ipapo. Nekudaro, guruva rakagara, uye zvese zvaive zvakanaka.
Fembera chii?… Margot Robbie naTom Ackerley vakasunga pfumo muByron Bay, New South Wales, muna Zvita 2016. Kubva ipapo, vaviri ava vakagara vachishanyira zviitiko zvinonakidza sezvatinoona mumufananidzo pazasi.
Iye haazeze kuratidza murume wake akanaka, Tom Ackerley. Ivo vaviri vanogadzira vakanaka vaviri.
Margot Robbie Hupenyu hweMunhu:
Iko hakuna kuramba kweChokwadi chekuti iye anoyevedza mutambi ane hunhu uye nyore-kuenda hunhu. Mineti yakapedzwa naye inogara ichisiya kunzwa kwekufara uye fungidziro isingagumi pane vateveri.
Zvinoita sekunge anoda kutamba akasiyana mitambo, uye isu tine humbowo nezvazvo. Akatotora Jimmy Fallon mumutambo weFlip Cup mhenyu paTV. Tarisa vhidhiyo kubva ku girazi.
Ndichiri kutsvagisa Bio yake, takaona kuti Robbie fan-yakaoma fan yeiyo hockey yechando. Iye akambotamba mumusangano welateur seye winger yekurudyi.
Pandinorongedza Hupenyu Hwake Nhau, iyo superstar inoramba iri mutsigiri akazvipira weNew York Ranger. Aiwanzopfeka juzi ravo kuti vaone machisi ehupenyu pamwe chete nemurume wavo kunhandare.
Hapana imwe nguva iri nani kuna Robbie pane paanofarira mutambo wakanaka nemukadzi wake anonakidza parutivi rwake.
Margot Robbie Mararamiro Echokwadi:
Nemubhadharo wake munyika yevaraidzo, nyeredzi iyi yakakwanisa kukwirisa hupenyu hwemhuri yavo. Kubva pakuonekwa kwezvinhu, ane maitiro akafanana ekushandisa semuimbi weBritish Dua Lipa, uye tichave tichikuudza zvakawanda nezvazvo munguva pfupi.
Robbie's $ 26 miriyoni Net Kukosha (2021 Stats) haina kubva pane zvaaiita ega ega. Akaita mari inofungidzirwa yemamiriyoni emadhora 1.2 kubva pachibvumirano che2020.
Margot Robbie Dzimba Nemota:
MuAustralia anogara achitora mukana wake mukurarama hupenyu hunofadza. Muna 2017, iye nemurume wake, Tom Ackerley, vakatenga imba yekurara mishanu inokosha madhora 2.73 mamirioni.
Akazviwanira iye nemhuri yake nzvimbo yakanaka yekuzorora. Tarira imwe yedzimba dzayo dzinodhura munzvimbo yeLos Angeles yeHancock Park.
Iye zvakare ane dzimwe dzimba uye akasiyana mabhureki emota dzekunze. Vhidhiyo iri pazasi inokusiya uchinetseka nenhamba yemidziyo inodhura yaRobbie.
Margot Robbie Hupenyu Hwemhuri:
Sezvineiwo, mafeni ake ekutanga anosanganisira nhengo dzese dzemhuri yake. Sezvambotaurwa, Robbie anowanzoisa pamitambo inonakidza yehama dzake, hanzvadzi naamai achiri mudiki. Muchikamu chino, isu tinokuudza akawanda anonakidza echokwadi nezvemhuri yake.
Nezve Baba vaMargot Robbie:
Iye munhu mumwe akachengetedzwa kunze kwemufananidzo weBio wake ndiDoug Robbie, baba vake. Sekureva kwake peji rewiki, baba vaMargot vaive musiki wenzimbe uye vaimbova muridzi-wepurazi.
Zvinosuruvarisa, akazviparadzanisa nehupenyu hwake kubva paakange ari 5. Mushure mezvo, Robbie anga asiri kusangana nababa vake. Chii chimwe?… Akaburitsa pachena kuti haafarire kumuziva mushure mekunge asiya mhuri yavo achiri manapukeni.
Kunyangwe Robbie asingataure nezve baba vake kubva paakatanga kuve nemukurumbira, mukoma wake (Lachlan) akaita neimwe nzira. Akambotumira mufananidzo (unoratidzwa pazasi) wake nababa vake paZuva raBaba. Mufananidzo wacho waive neshoko remoyo iro raiti;
"Unogona kunge usiri nemhuri yakajairika, asi wakandipa fundo uye kundibatsira panguva yandaida iyo."
Mufananidzo usingawanzoitika wababa vaMargot Robbie, Doug Robbie, nemukoma wake mukuru.
Nezve amai vaMargot Robbie:
Nyeredzi inotsanangura amai vake (Sarie Kessler) semunhu anotapira pasi pano. Ehezve, amai-mwanasikana chisungo pakati pevaviri hazvinzwisisike. Hazvishamisi kuti vanogara vachionekwa pamwe chete.
Sangana naye anonakidza supermom. Chokwadi, Margot akagara nhaka kunyemwerera kwakanaka kwemubereki wake chete anotsigira.
Nemubhadharo wake se physiotherapist, Sarie akaita zvese zvaaigona kuti iye oga-kurera kurera vana vake vana. Izvo zvese zvaive zvekutenda kwaari kuti Robbie aigona kuzadzisa chokwadi chezviroto zvake.
Sechiratidzo chekutenda, muimbi akashandisa yake yekutanga kuHollywood kubhadhara-cheki kubhadhara amai vake mogeji.
Nezve hama dzaMargot Robbie:
Kukura asina baba vake kwakaita kuti atarise kumusoro kuna Lachlan (mukoma wake mukuru), uyo airidza baba baba muhupenyu hwake. Sezviri pachena, Robbie ane vakoma vaviri mukoma nemunin'ina waanoda kwazvo.
Tarisai mukoma wake wedangwe, Lachlan. Iye stuntman wekuAustralia.
Pazuva rekuzvarwa makumi matatu rehanzvadzi yake mukuru, Anya, Margot akamuburitsa kunze kwekunakidzwa kwekunze. Ivo vaviri vakatora rwendo kuchitima chine mukurumbira pasi rose cheGhan, chakazove chinonakidza.
Heano mufananidzo weanoremekedzeka mukuru mukoma, Anya.
Iko hakuna chikonzero chekusurukirwa chero iye munin'ina wake munin'ina (Cameron Robbie) aripo. Sezvineiwo, akaunganidza pamusoro pevateveri ve67,000 pane rake Instagram peji.
Chokwadi ndechekuti, Cameron anofarira kushandisa nguva naMargot Robbie. Hunhu hwake hwehupenyu hunogara hunowoneka nguva imwe neimwe yaanoigadzira kune kapeti tsvuku pamwe nehanzvadzi yake. Ona maitiro aakaita kumubvunzo weprank yemukoma wake wemwana paMTV muvhidhiyo iri pazasi.
Achienderera mberi kumadzitateguru ake, sekuru nasekuru vake vaive Herbert Justus Kessler naVerna Mibus. Chokwadi, vaive nesimba rakakosha pahudiki hwake.
Sangana naambuya vake vanasekuru, avo vaanokoshesa kupfuura goridhe vachiri vapenyu.
Zvinosuruvarisa, Robbie akarasikirwa nasekuru vake vanodakadza mukati megore. Kutanga, aifanira kupfuura nemarwadzo ekurasikirwa nambuya vake muna Kubvumbi 2019. Mushure mezvo, akashamiswa nekupera kunosuwisa uye nerunyararo kwasekuru vake muna Kukadzi 2020.
Sezvo ini ndichinyora iyi Bio, hapana chakataurwa pamusoro pasekuru vake, vatete uye nevamwe vese vemhuri yake.
Margot Robbie Untold Chokwadi:
Kuputira mutambi weiyo Bio, hezvino zvishoma nezve iye izvo zvaizokubatsira iwe kuti unzwisise zvizere nezve Hupenyu Hwake Nyaya.
Chokwadi # 1: Chikonzero cheZita rake reNickname:
Zvinonakidza zvakakwana, zita rake remadunhurirwa rekuti "Maggot". Izvo zvaive pachena kuti zvakagadzirwa kubva pazita rake rekutanga, Margot, paakange ari muGrade yekutanga. Kare kumashure, iye-5-gore-rekukura akasema iye sobriquet.
Nekudaro, zvakamutorera makore angangoita matatu asati agamuchira zita rake remadunhurirwa. Kunyangwe paakatamira kuMelbourne, vanhu vaingomuti Maggot asati avazivisa moniker kwavari.
Chokwadi # 2: Margot Robbie - An Amateur Tattoo Artist:
Pamwe iwe hauna kumboziva kuti aive amateur tattooist. Ehe, iyo Harley Quinn cast yaita anopfuura makumi mashanu maatatoo kune akasiyana vatengi panguva yekunyora iyi Bio.
Chimwe chinhu chinonakidza nezverutivi rwake kumhanya ndechekuti anga asiri nyanzvi yekunyora tattoo. Zvese zvaakaita kwaive kutenga tatoo pfuti pa eBay neinki imwe hunyanzvi hwemuviri pane chero anotonhorera nayo.
Sezvaitarisirwa, akange aine mamwe matambudziko paakamuita masevhisi. Asi Robbie haana kumbobvira aodzwa moyo kuti aenderere mberi nekuita inki. Pakarepo, chiitiko chinoshamisa chakaitika, icho chakamuita kuti asiye pfuti yetatoo.
Mucherechedze iye achitsanangura zvakashata zvisirizvo zvakamuita kuti arege kupa kwake inking services muvhidhiyo iri pazasi.
Chokwadi # 3: Margot Robbie Chitendero:
Kunyangwe iye achiedza kuchengetedza hupenyu hwepachivande, mutambi wacho haana kuvanza chokwadi chechitendero chake. Ehe, atora nhanho yakasarudzika kubva Chris Hemsworth mune zvekunamata.
Izvi zvinotiunzira kune chokwadi chekuti Robbie muKristu. Moreso, haanyari kutaura kutenda kwake muna Jesu Kristu.
Margot Robbie Biography Pfupiso:
Tisati tapedzisa kukanda Biography yeAustralia, tarisa nekukurumidza pfupiso yeHupenyu Hwake Nyaya mutafura iripazasi.
Zita rizere: Margot Elise Robbie
Zita rekudanwa: Honye
Nzvimbo yekuzvarirwa: Dalby, Queensland (Australia)
Baba: Doug Robbie
Amai: Sarie Kessler
Vanun'una: Anya, Lachlan naCameron Robbie
Murume: Tom ackerley
Net Worth: $ 26 mamirioni (2021 Stats)
Hobbies: Ice Skating uye kutarisa echando Hockey mitambo
Ethnicity: MaScotland, maGerman neSorbian
kukwirira: 1.68 m (5 Tsoka 6 inches)
se Shania Twain, Robbie ari pakati pevakawanda vanozivikanwa vasina kumbobvumidza kurambana kwevabereki vavo kutadzisa kubudirira kwavo. Sezvineiwo, kugona kwake kujairana nemhando dzakasiyana dzematambudziko ndicho chimwe cheiyi kiyi dzekusimudzira kwake meteoric kumukurumbira.
Ehezve, anogara achitenda kuna amai vake, avo vasina murume-vakamurera iye pamwe nevanun'una vake. Kwemakore, chisungo chake nemhuri yake chakaratidza kuve chakasimba kwazvo kupfuura anozivikanwa maCovalent Mabond.
Nditendese kana ndati chiyero cheBiography yake chakanyatsoenderana kune vanhu nevadikanwa vakamukomberedza.
Tinokutendai nekuverenga yedu inobata nyaya yaMargot Robbie Yehucheche uye Biography. Ndokumbira utitane nesu kana iwe ukawana chero isina kukodzera ruzivo mune yedu chinyorwa paMargot Robbie.